Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mamely ny hazakazaka ambany amin'ny 2020
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny birao fizahan-tany Anguilla dia mamely ny hazakazaka ambany amin'ny 2020
The Anguilla Tourist Board (ATB) ekipa dia nanomboka andiam-panatontosana varotra tamin'ny voalohan'ny Taom-baovao, tapa-kevitra ny hitazona ny vanim-potoana ary hanorina ny fahombiazan'ny taona 2019. Ny fahatongavan'ireo mpizahatany mandritra ny taona dia antenaina hahatratra ireo ambaratongam-pamakiana mifototra amin'ny fahombiazana matanjaka hatramin'ny voalohan'ny volana 2019, ary isa voalohany ho an'ny volana Novambra sy Desambra. Manantena ny hahatratra 95,000 ny fahatongavan'ireo mpizahatany ny ATB, hahatratra ny tanjona kendrena amin'ny fiakarany 2019% amin'ny fahatongavana 20, izay tsara indrindra tamin'ny taona teo aloha.
Teo ambany fitarihan'ny filoha lefitra Donna Daniels-Banks, ny ATB dia nanao fivoriana fivarotana tany New York City niaraka tamin'ny solontenan'ny marketing avy amin'ny Head Office, Etazonia, United Kingdom ary Kanada, mba hametraka sori-dalana ho an'ny toerana haleha ho an'ny 2020. " tanjona kendrena amin'ny fiakaran'ny 20% ny fahatongavan'ireo mpizahatany ary ny haavon'ny trano onenana 60% amin'ny taona 2020, "hoy Ramatoa Daniels-Banks. “Tena nampahery anay ny zava-bita tamin'ny taon-dasa, sy ny valin-kafanam-po amin'ny Anguilla na avy amin'ny varotra na amin'ny mpanjifa. Fantatray ary tapa-kevitra izahay fa hikatsaka tetik'ady stratejika isan-karazany izay hitondra asa fanampiny mandritra ity taona ity, hahafahanay hahatratra ny tanjonay ary hitondra ny nosinay ho amin'ny sehatra vaovao. ”
Ny ATB dia nampiranty ny nosy tamin'ny faran'ny herinandro teo tao amin'ny New York Times Travel Show, fihaonambe momba ny dia sy fivarotana lehibe indrindra tany Amerika Avaratra, natao tao amin'ny Jacob Javits Center any New York City ny 24 - 26 Janoary 2020.
Ny tranoborona Anguilla dia fampihetsiketsehana feno hetsika, nahasarika mpanolo-tsaina an'arivony an'arivony sy mpitsidika mety maniry hahafantatra bebe kokoa momba ny nosy sy ireo toeram-pialan-tsasatra ary ireo manintona azy. Tamin'ity taona ity ny Tourist Board dia nampiditra singa vaovao maro, nanararaotra ny teknolojia farany. Fampisehoana nomerika vaovao, miaraka amin'ny sary an-tsary mahavariana ao amin'ny nosy, no nanome topy maso manintona ny zavatra niainana sy ny zava-manintona.
Ireo mpitsidika ny trano rantsan-kazo dia nanararaotra niditra tamin'ny fifaninanana sweepstakes ho an'ny fandaniana rehetra naloa ho an'ny roa nankany Anguilla, nomen'ny ATB sy mpanome tolotra maromaro, miaraka amin'ny trano fandraisam-bahiny ao amin'ny Carimar Beach Club, tamin'ny fisoratana anarana amin'ny iray amin'ireo roa fampisehoana efijery. Ny antsapaka dia hatao amin'ny herinandro aorian'ny fampisehoana, ary ny mpandresy dia nambara tamin'ny faran'ny volana Janoary.
Ho fanampin'ny fisoratana anarana amin'ny fifaninanana dia afaka misafidy sy milentika ihany koa ireo mpitsidika amin'ny karazana traikefa fitodiana. Nisy karazana tolotra fampiroboroboana manokana amin'ny ririnina avy amin'ny sehatry ny trano fandraisam-bahiny nozaraina ihany koa, mampiseho ny isan'ny safidy sy ny isa vidin'ny mpitsidika an'i Anguilla. Ny fananana nasongadina dia ny Zemi Beach House Hotel & Spa-LXR Hotels & Resorts, Shoal Bay Villas, Carimar Beach Club, Long Bay Villas, Spyglass Hill Villa ary Tranquility Beach Anguilla.
Rolf Masshardt, Tale Jeneralin'ny Carimar Beach Club, dia niditra tao amin'ny booth ATB, nizara vaovao momba ny Charming Escapes, fanangonana mahafinaritra eny an-tsena midadasika, izay mameno ny sehatry ny toeram-pialan-tsasatra sy villa.
Ho fanampin'ny brochures isan-karazany sy ny fiantohana marika Anguilla, nahasarika olona iray hafa ny fanandramana ronono isan'andro, izay nahatonga an'i Anguilla ho iray amin'ireo toerana malaza indrindra tamin'ny fampisehoana.
Nandray anjara tamin'ny andiany latabatra "Focus on the Caribbean" ny ATB izay notohanan'ny Caribbean Tourism Organization (CTO), ampahany amin'ny fandaharam-pampianarana feno natao ho an'ireo matihanina amin'ny dia manatrika ny fampisehoana. Jameel Rochester, Manager, Corporate Affairs, (Ag) dia nanao famelabelarana fohy momba ny fetin'i Anguilla, ao anatin'izany ny horonantsary mihetsiketsika manasongadina ireo festival maro mahaliana ao amin'ny nosy, mifanaraka amin'ny fanentanana ataon'ny CTO hampiroborobo ny hetsika ara-kolontsaina ao amin'ny faritra.
Ny ekipa ATB, notarihan'ny filoha lefitra Donna Daniels-Banks, dia nahitana mpikambana ao amin'ny birao ATB Marisa Gumbs, Jameel Rochester, mpitantana raharaham-bahiny (Ag.); Talen'ny varotra, Lorine Charles St. Jules ary Jackie Vickers avy amin'ny Turnstyle Marketing Inc. Steve Defontes sy Grace Capuzzo avy amin'ny Big Idea Advertising, ary Alison Ross avy amin'ny PM Group.
Ny tantara lehibe indrindra amin'ny tantaran'ny fizahantany manerantany
Ny fisondrotan'i Sina kilasy antonony dia mitombo ny fitomboan'ny tsenan'ny Carriers Service